Maitiro ekuchinja chinzvimbo cheDock pane yako Mac | Ndinobva mac
Ungachinja sei chinzvimbo cheDock pane yako Mac
Imwe sarudzo inowanikwa nevashandisi veMac ndeyekugadzirisa chinzvimbo cheDock. Hongu, izvi zvingaite kunge chiChinese kwauri kana iri yako yekutanga Mac asi iyi sarudzo yanga iriko kwemakore uye nhasi tichaona kuti tingagone sei gadzirisa nzvimbo yeDock.
Tinogona kusiya iyi Dock nezvikumbiro munzvimbo yepakati, inova nzvimbo chete kwayakabva, tinogona kuichinja kuruboshwe kana kurudyi. Iyi sarudzo yakapusa kuitisa uye mushandisi wega akasununguka kuita sarudza chinzvimbo chechiteshi.
Zvakareruka sekuwana iwo marongero eDock
Izvi zvakapusa sekuwana marongero eDock uye kutsvaga sarudzo "Chinzvimbo pachiratidziri" iyo yatinowana pamusoro peiyi marongero. Muchikamu chino tine zvitatu zvatinogona kusarudza kubva: Kuruboshwe, Pasi uye Kurudyi. Tinofanira kungodzvanya pane yatinoda zvakanyanya uye ndizvozvo.
Mune ino kesi, shanduko iri yekukasira, saka tinogona kumbobvira taona kana tichida nzvimbo kana kuti kwete uye nekuichinja pane nhunzi. Tinogona kutaura kuti iyi sarudzo ine makore mazhinji kumusana asi izvo kazhinji vamwe vashandisi ndivo vanoshandisa mukana uyu. Mune yangu kesi ini ndinogara ndine Dock pazasi uye dzimwe nguva ndinoona vashandisi vane iyo yakavanzwa, asi mazhinji acho ari pazasi. Uye newe Iwe une kupi Dock yakaiswa pane yako Mac?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Ungachinja sei chinzvimbo cheDock pane yako Mac
Mafomu uye mitambo yeMac ine zvinonakidza zvidzikiso zveKisimusi
Chikwata cheSoy de Mac chinokushuvira Kisimusi yakanaka!